Chikonzero Nei Tisingafaniri Kureva Nhema—Dzidzisa Vana Vako
NGATITI mumwe musikana anoudza amai vake kuti: “Ndichauya kumba kana ndangopedza chikoro.” Asi zvino anosara kuchikoro otamba neshamwari dzake ozonoudza amai vake kuti: “Mudzidzisi wangu ati ndisare kuchikoro.” Zvingava zvakanaka here kutaura zvakadaro?—
Mukomana uyu akanganisei?
Kana kuti zvimwe mukomana anoudza baba vake kuti: “Aiwa, handina kutambira bhora mumba.” Asi zvakadini kana zviri izvo zvaaita? Pangave nechakaipa here kana akati haana kudaro?—
Mudzidzisi Mukuru akatiratidza chinhu chakarurama chokuita. Akati: “Ingoregai shoko renyu rokuti Hungu rireve Hungu, Aiwa wenyu, Aiwa; nokuti zvinopfuura izvi zvinobva kune wakaipa.” (Mateu 5:37) Jesu airevei nokudaro?— Aireva kuti tinofanira kuita zvatinenge tataura.
Pane nyaya iri muBhaibheri inoratidza kuti zvinokosha sei kutaura chokwadi. Iri pamusoro pevanhu vaviri vaiti vaiva vadzidzi vaJesu. Ngatione kuti chii chakaitika.
Pasina mwedzi miviri Jesu afa, vanhu vazhinji vanobva kure vanouya kuJerusarema nokuda kwomutambo unokosha wevaJudha unonzi Pendekosti. Muapostora Petro anopa hurukuro yakanaka kwazvo achiudza vanhu nezvaJesu, uyo Jehovha akamutsa kubva kuvakafa. Aka ndekokutanga apo vazhinji vauya kuJerusarema vanodzidza nezvaJesu. Zvino vanoda kudzidza zvakawanda. Saka vanoitei?—
Vanogara kwenguva ya- kareba kupfuura zvavaitarisira. Asi pashure penguva yakati, vamwe vavo vanopererwa nemari uye vanoda kubatsirwa kuti vatenge zvokudya. Vadzidzi vari muJerusarema vanoda kubatsira vaenzi vacho. Saka vazhinji vavo vanotengesa zvinhu zvavo vachiuya nemari kuvaapostora vaJesu. Avo vanozopa mari yacho kune vanoda kubatsirwa.
Ananiyasi nomudzimai wake, Safira, avo vari nhengo dzeungano yechiKristu muJerusarema, vanotengesa munda wavo. Hapana anovaudza kuti vautengese. Vanozvifungira voga kudaro. Asi zvavanoita hazvisi bedzi nokuti vanoda vadzidzi vatsva vaJesu. Chaizvo Ananiyasi naSafira vanoda kuita kuti vanhu vafunge kuti vari nani kupfuura zvavari. Saka vanosarudza kutaura kuti vari kupa mari yose kuti vabatsire vamwe. Chaizvoizvo vachangopa imwe yacho bedzi asi voti vari kupa yose. Unofungei nezvakadaro?—
Ananiyasi anouya kuzoona vaapostora. Anovapa mari yacho. Chokwadi, Mwari anoziva kuti haasi kupa yose. Naizvozvo Mwari anozivisa muapostora Petro kuti Ananiyasi haana kutaura chokwadi pamusoro penyaya yacho.
Ananiyasi ari kutaurira Petro nhema dzokuti chii?
Zvino Petro anoti: ‘Ananiyasi, nei warega Satani achikuitisa zvinhu zvakadai? Munda wanga uri wako. Hauna kumanikidzwa kuutengesa. Uye kunyange pashure pokunge watengesa munda wacho, zvanga zviri kwauri kusarudza zvawaizoita nemari yacho. Zvino nei uri kuita sokuti uri kupa mari yose nepo uri kungopa chikamu chayo bedzi? Nokuita izvi uri kureva nhema, kwete kwatiri bedzi, asi kuna Mwari.’
Iyi inhau huru. Ananiyasi ari kureva nhema! Haasi kuita zvaanoti ari kuita. Ari kungoedzesera kuzviita chete. Bhaibheri rinotiudza zvinotevera kuitika. Rinoti: ‘Paanonzwa mashoko aPetro, Ananiyasi anowira pasi obva afa.’ Mwari anouraya Ananiyasi pakarepo! Pashure pacho, mutumbi wake unobudiswa panze wonovigwa.
Chii chinoitika kuna Ananiyasi nokuti akareva nhema?
Kwapera anenge maawa matatu, Safira anopinda. Haazivi zvaitika kumurume wake. Saka Petro anomubvunza kuti: ‘Imi muri vaviri matengesa munda nemari yamatipa here?’
Safira anopindura kuti: ‘Hungu, tatengesa munda nemari iyoyo.’ Asi idzodzo inhema! Vakasara neimwe mari pane yavakatengesa munda. Saka Mwari anourayawo Safira.—Mabasa 5:1-11.
Tinofanira kudzidzei kune zvakaitika kuna Ananiyasi naSafira?— Zvinotidzidzisa kuti Mwari haadi vanoreva nhema. Anoda kuti titaure chokwadi nguva dzose. Asi vanhu vakawanda vanoti zvakanaka kureva nhema. Unofunga kuti vanhu ivavo zvavanotaura zvakarurama here?— Waizviziva here kuti urwere hwose, marwadzo, uye rufu zviri pasi pano zvakauya pamusana pokureva nhema?—
Jesu akati ndiani akataura nhema dzokutanga, uye zvakaguma nei?
Yeuka, Dhiyabhorosi akanyepera mudzimai wokutanga, Evha. Dhiyabhorosi akamuudza kuti aisazofa kana airega kuteerera Mwari odya muchero uyo Mwari akanga ati asadya. Evha akabvumirana naDhiyabhorosi ndokudya muchero wacho. Akaita kuti Adhamu audyewo. Zvino vakanga vava vatadzi, uye vana vavo vose vaizoberekwa vari vatadzi. Uye nokuti vaiva vatadzi, vana vose vaAdhamu vakatambura vakafa. Nhamo yose iyi yakatanga sei?— Yakatanga nenhema.
Ndosaka Jesu akataura kuti Dhiyabhorosi “murevi wenhema nababa venhema”! Ndiye akatanga kureva nhema. Chero mumwe munhu paanotaura nhema, ari kuita zvakatanga kuitwa naDhiyabhorosi. Tinofanira kufunga nezvazvo pose patinongonzwa tava kuda kureva nhema.—Johani 8:44.
Ndirini paunganzwa wava kuda kureva nhema? — Hapasi paya paunenge wakanganisa chimwe chinhu here?— Ungaputsa chimwe chinhu kunyange ungave usina chinangwa chokudaro. Kana ukabvunzwa nezvacho, unofanira kutaura kuti mukoma wako kana kuti ihanzvadzi yako yazviita here? Kana kuti unofanira kuita sousingazivi here kuti zvaitika sei?—
Ndepapi paunganzwa uchida kureva nhema?
Zvakadini kana waifanira kuita basa rako rokuchikoro rinoitirwa kumba, asi wobva watadza kupedza? Unofanira kuti wakaita rose here kunyange zvazvo usina?— Tinofanira kuyeuka Ananiyasi naSafira. Havana kutaura chokwadi chakazara. Uye Mwari akaratidza kuti izvozvo zvakanga zvakaipa zvakadini nokuvauraya pakarepo.
Naizvozvo pasinei nezvatingaita, nguva dzose zvichaita kuti zvinhu zvitoipisisa kana tikareva nhema, uye hatifaniri kumbotaura chokwadi chisina kuzara. Bhaibheri rinoti: ‘Taurai chokwadi.’ Rinotiwo: “Musareverane nhema.” Jehovha anotaura chokwadi nguva dzose, uye anotitarisira kuitawo saizvozvo.—VaEfeso 4:25; VaKorose 3:9.
Tinofanira kutaura chokwadi nguva dzose. Izvozvo ndizvo zvinotaurwa pana Eksodho 20:16; Zvirevo 6:16-19; 12:19; 14:5; 16:6; naVaHebheru 4:13.